Ahoana no Hatao Raha Nisaraka Ianareo Roa? | Ho An’ny Fianakaviana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ahoana Raha Nisaraka Ianareo Roa?
“Nieritreritra aho hoe nahita an’ilay olona mety amiko. Hozy aho hoe: ‘Holaniko miaraka aminy ny androm-piainako.’ Tsy maintsy nisaraka taminy anefa aho rehefa avy niaraka roa volana izahay. Tsy nampoiziko hoe hisaraka vetivety izahay, nefa hoatran’ireny tsy tetỳ an-tany ireny tamin’ny voalohany.”—Anna. *
“Be dia be ny zavatra nitovizanay. Nino be mihitsy aho hoe hivady izahay. Tsapako anefa, tatỳ aoriana, fa tsy nitovy mihitsy izahay sy izy. Nisaraka taminy aho rehefa hitako hoe tena tsy nety ny safidy nataoko.”—Elaine.
Izany ve no nitranga taminao sy ilay olona nirinao ho vady? Hanampy anao ity lahatsoratra ity, raha izany no izy.
Mafy foana ny misaraka, na ianao aza no nanapaka an’ilay fiarahana. Nisaraka tamin’ny olon-tiany i Sarah, rehefa avy niaraka enim-bolana ry zareo. Hoy izy: “Tena mafy ilay izy. Tsy hitahita akory mantsy izahay dia nisaraka. Rava ny nofinofinay. Nahatsiaro ny fotoana mamy niarahanay aho, rehefa naheno an’ireo hira nankafizinay. Nalahelo azy koa aho, rehefa nandeha tamin’ireo toerana falehanay. Izany no nahazo ahy na dia izaho aza no nanapaka an’ilay fiarahana.”
Misy mahatsara azy ihany ny misaraka na dia mafy aza. Hoy i Elaine: “Tsy te hampalahelo an’ilay olona ianao. Tsapanao anefa hoe ianareo roa mihitsy no harary fo, raha mbola miaraka foana nefa efa hita hoe tsy mitovy ny tadin-dokanga.” Hoy i Sarah: “Raha tsy mahatsiaro sambatra ianao amin’ny fotoana iarahanao amin’ny olona iray, dia azo antoka hoe tsy ho sambatra koa ianao rehefa manambady azy. Aleo tonga dia misaraka raha tsy te hijaly.”
Tsy midika akory izany hoe tsy misy antenaina intsony ny aminao. Natao hanampiana anao handray fanapahan-kevitra ny fiarahana, fa tsy voatery hiafara amin’ny fanambadiana foana. Aleo misaraka rehefa hita hoe manana olana ngezabe ny iray aminareo. Tsy hoe vita hatreo akory ny aminao raha izany no mitranga. Mbola afaka miatrika ny fiainana foana ianao. Amin’ny fomba ahoana?
Ekeo hoe mafy aminao ilay izy. Hoy ihany i Elaine: “Very namana aho. Tsy namana tsotra fotsiny izy tamiko, fa tena namana akaiky.” Ara-dalàna raha malahelo ianao rehefa nisaraka tamin’olona iray tena akaiky anao. Hoy i Adam: “Marary fo foana ianao rehefa nisaraka tamin’olona iray, na dia fantatrao aza hoe izay no tokony hatao.” Mety hanao hoatran’i Davida Mpanjaka ianao. Hoy izy: “Vonton-dranomaso ny fandrianako mandritra ny alina.” (Salamo 6:6) Ahoana no atao raha tiana hisinda ny alahelo? Mora afaka kokoa ilay izy raha tsy afenina. Izany no dingana voalohany.—Toro lalan’ny Baiboly: Mpitoriteny 3:1, 4.
Miezaha hifanerasera amin’ny olona afaka manampy anao. Mety tsy ho mora aloha izany. Hoy i Anna, ilay voaresaka terỳ aloha: “Tsy te hihaona tamin’iza n’iza mihitsy aho tamin’ny voalohany. Elaela mantsy vao sitrana ilay ratram-po. Nila naka fotoana koa aho, amin’izay mba afaka mandinika sy mahatakatra tsara an’ilay zava-nitranga.” Hitan’i Anna ihany anefa hoe tsara ny mifanerasera amin’ny namana akaiky, satria ireo no afaka mampahery. Hoy izy: “Falifaly kokoa aho izao, ary tsy dia misy vokany amiko intsony ilay fisarahana.”—Toro lalan’ny Baiboly: Ohabolana 17:17.
Mandraisa lesona. Saintsaino hoe: ‘Hita avy amin’iny zava-nitranga iny ve hoe misy zavatra mila iezahako? Inona no azoko atao mba tsy hiverenan’izany intsony?’ Hoy i Marcia: “Azoko tsara ny zava-nitranga rehefa nandeha ny fotoana. Efa ela be tatỳ aoriana anefa izany, satria tamin’izay aho vao tsy nentanin’ny fihetseham-po fotsiny fa mba afaka nijery ny tena zava-misy.” Hoatr’izany koa ny nahazo an’i Adam. Hoy izy: “Herintaona taorian’ny nisarahanay aho vao tsy nalahelo be intsony. Mbola ela be taorian’izay aza aho vao afaka nandray lesona avy tamin’ilay izy. Betsaka ny zavatra nianarako momba ny tenako sy ny ankizivavy ary ny fifandraisana amin’olona. Tsy malahelo be intsony aho izao.”
Resaho amin’i Jehovah ny zavatra mampanahy anao. Milaza ny Baiboly fa “manasitrana an’ireo torotoro fo” Andriamanitra, ary “manisy fehy ny ratran’izy ireo.” (Salamo 147:3) Marina aloha hoe tsy mitady vady ho antsika Andriamanitra, ary tsy tokony homena tsiny koa izy raha voatery nisaraka isika sy ilay olon-tiantsika. Na izany aza, dia mitady izay hahasoa antsika foana izy. Resaho aminy daholo àry izay ao am-ponao.—Toro lalan’ny Baiboly: 1 Petera 5:7.
“Ny zava-drehetra dia samy misy fotoana voatondro ho azy avy ... misy fotoana itomaniana.”—Mpitoriteny 3:1, 4.
‘Natao hanampy amin’ny fotoam-pahoriana ny tena namana.’—Ohabolana 17:17.
“Apetraho [amin’Andriamanitra] daholo izay rehetra mampanahy anareo, satria miahy anareo izy.”—1 Petera 5:7.
“METY SITRANA NY RATRAM-PO”
“Nanamelo-tena aho rehefa nisaraka tamiko ilay olon-tiako. Nikorontana ny lohako, lasa nanirery aho, ary hoatran’ny tsy nisy dikany ny fiheverako ny tenako. Ny ratram-po no tena tsy zaka. Tsy nieritreritra ny hampijaly antsika anefa Andriamanitra. Na nataony afaka mitia aza mantsy isika, dia nataony mety sitrana koa ny fontsika, raha ohatra ka misaraka amin’olona isika. Elaela ianao vao raiki-pitia amin’olona iray, dia elaela koa vao sitrana ny ratram-po rehefa misy ny fisarahana. Afaka matoky anefa isika fa mety sitrana ny ratram-po.”—Marcia.
Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny toko 31 amin’ny boky Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa, Boky 1. Jereo ao amin’ny hoe ZAVATRA MISY > BOKY & BOKIKELY.
Diniho ireo fanontaniana efatra ahalalanao raha efa afaka mampiaraka ianao na tsia.